Part 1. Top 10 Chart nke Free Online Android Tablet Games
Nkebi nke 2: Top 10 Chart nke ugwo Android Tablet Games
Part 3. ise Markets maka Games
The akporo mbadamba nwetara ukwuu anya nke ọtụtụ nde ndị ahịa n'ihi na ha nnukwu kristal doro anya meziri, egwuregwu na ọtụtụ onyeōzi atụmatụ, nke nwere ike ọgaghị adị na Android mobile igwe. Ee, akporo mbadamba-egosi nwere ibu meziri na egwuregwu nwere ike na-enwe egwuregwu na a ibu ma doo anya na interface mgbe akara nhọrọ nwere nnọọ apụtakarị. E nwere ọtụtụ narị ndị dị otú ahụ egwuregwu nke dị online na ndị ọrụ nwere ike ibudata ịdị na-akpọ ma nanị ole na ole dị oké ọnụ ahịa na-akpọ. Anyị nwere ndepụta nke top iri free online mbadamba Android egwuregwu, malite nọmba 10 na 01.
Nke a mgbaghoju anya egwuregwu e ọma kwetara site Android egwuregwu ọrụ na ị ga-enweta ịbanye ka a ogologo anụ ụwa, inyocha ọtụtụ ihe omimi na idozi dị iche iche egwuregwu mgbagwoju anya. Ndabere ụda tracks nwekwara obi na-emetụ n'ahụ ma na ị na-aga n'anya egwuregwu a n'ihi na ya ịtụnanya atụmatụ.
09. Game nke Agha
Agha ka malitere na i nwere ike ga-aja. Ị bụ nchebe nke gị nnukwu ụlọ ma na-etolite agha gị. Inyocha gị battalion mmụọ ka ọ na-esi na-achịkwa ihe niile nke na-atụghị anya na-eme, tinyere ụzọ gị ịga nke ọma.
Ịtụnanya racing egwuregwu na-agụnye racing tracks si ata ụwa na nanị Dubai si eji ire ụtọ tracks ka nke ọma, na-enye gị ohere ịdọrọ gị wiil on ụwa klas racing tracks.
07. Hearthstone Heroes nke Warcraft
Ọ bụ ọzọ mara egwuregwu na nke dị mkpa ka ị collection nke dị iche iche kaadị. Nke a ga-enye gị ọzọ fim na i nwere ike iru gị onwe gị oche na pụkwara inwe akara nke battlefields na kpọọ ndị minions. Egwuregwu a nwere àgwà na-enye ohere multiple Player egwu egwuregwu ozugbo site n'ikwe otu ọkpụkpọ na-egwu si mbadamba na ndị ọzọ na n'otu oge si ya / ya PC.
06. Swiiti anwụrụ Game
The swiit anwụrụ egwuregwu na-aga-eme ka ị hungrier ya tọrọ ụtọ candies na ndabere ụda na-ọma mepụtara. Ị na-aga n'anya egwuregwu a. Get a free egwuregwu na 15 ọkwa ndị ọzọ na ọ pụtara ugbu a, ị ga-enwe ngụkọta 1025 etoju. Bụ na oké ozi ọma n'ihi swiiti hụrụ?
05. Iwe nnụnụ
Egwuregwu a enwetatụbeghị niile milestones na ihe ịga nke ọma na nnọọ obere oge nke ya ntọhapụ. Ọhụrụ version nke egwuregwu a na-enye ohere ọrụ iji nweta ike ma na-pigs na ha. Ha mkpa ka onwe pigs si nnukwu ụlọ na enyemaka nke nnụnụ ike. Otú ọ dị, Iwe nnụnụ Stella Pop enye ọrụ na ohere ka dakọtara egosipụta na na agba na mgbe ahụ ịfụ ha ka ha nweta ihe lekwasịrị anya.
04. Ọjọọ: Gods n'etiti anyị
Warner Bros International Enterprises tọhapụrụ ya ọgụ egwuregwu na a June 25, 2015 na ndị niile kwere nghọta nhọrọ na ụdịdị nke play. Onye ọrụ kwesịrị ka a otu nke atọ Player na mgbe ahụ, ha ga-alụ ọgụ na atọ otu egwuregwu nke iro. Niile atụmatụ bụ ikenyeneke mbiet na smartly e.
Ọ bụ ihe ọzọ na smart egwuregwu a na-mmasị site kasị nke mbadamba ọrụ. Na egwuregwu a ị chọrọ ka dakọtara egosipụta nke otu na agba na mgbe ị na-eme na a azụmahịa, ndị niile adịkwa egosipụta na-tụrụ bọmbụ na wepụrụ ihuenyo dị ka na ikpe nke swiit anwụrụ. Otú ọ dị, otu na-ezighị ezi mkpebi nwere ike ime ka gị egwuregwu mgbagwoju maka gị. The akara na-akpali n'ihu na nkebi ịga n'ihu na-igbu nke ọzọ na ndị ọzọ egosipụta.
02. Nwụrụ Anwụ ịkpalite 02
Nwụrụ anwụ Agu 2 bụ ihe Android egwuregwu n'ihi na mbadamba nkume na ndị niile ikenyeneke mbiet ndịna-emeputa na animations. Dị ka aha-egosi, ọ bụ a na-egbu egwuregwu na nke ọkpụkpọ bụ igbu zombies na a fun ụzọ. Ọhụrụ version nke egwuregwu e wepụtara na July 07, 2015. Ị nwere inyocha gburugburu ụwa na nhọrọ igbu zombies na 37 ụdị nke egbe na ngwá agha.
Ọ bụ otu n'ime pụtara ìhè egwuregwu innovations ke gam akporo ụwa nke egwuregwu. E nwere ihe karịrị 100 nkebi maka egwuregwu a na jupụtara ịtụnanya atụmatụ. Ọ na-e gosiri 5/5 site AppSmile na 9.2 / 10 site Multiplayer.it.
Part 2. Top 10 Chart nke ugwo Android Tablet Games
Egwuregwu bụ banyere nwa agbọghọ na-na-ẹkenịmde site iju gburugburu ebe obibi ebe ị chọrọ ịkwaga putara ighe-esi nke ọnọdụ. Dị ka Polygon, "ọ bụ a ga-play egwuregwu na 2014."
Nke a bụ egwuregwu maka iga ndị hụrụ. Ị nwere niile ụdị ugbo ala na aircrafts imezu ọzọ. Pịa na njikọ n'okpuru ma na-gị egwuregwu ozugbo.
08. Game nke Thrones
Egwuregwu a na-arụ ọrụ dị ka na TV ị ga-abịakwa na-emekọ na-ekwurịta okwu na otutu TV odide ka n'ihu akpali n'ime egwuregwu. Ọ bụ usoro egwuregwu na mkpa ka ị na-ege ntị ya odide ịghọta isiokwu. Ndabere bụ nnọọ kediegwu. Ọ na-achọ dịkarịa ala 1 GB ohere na gị taabụ ma 1.2 GHz processor.
A na-eju egwuregwu na-enye gị ule oge gị stratejik eche echiche. Ị mkpa ịzọpụta ụlọ elu site n'èzí ọgụ ma nwekwara ike ime ka gị agha na-alụ ọgụ.
06. Baldur n'ọnụ ụzọ ámá
Ahịa: $ 89-44.99
Egwuregwu bụ n'ezie a PC egwuregwu na e wetara mbadamba nkume ndị afọ 2014, na ihe nile ịtụnanya atụmatụ. The njikwa na-ọma onwem. The stratejik egwuregwu bụ mgbagwoju ga-ewe gị ogologo oge ịrụcha.
05. ifo si Borderlands
Enyi abụọ chọpụta ego mgbe na osimiri ma na ha chere na ọ bụ nke ha. Ma, njem amalite mgbe ya. Pịa na n'okpuru kwuru njikọ na inyocha ihe n'ezie na-eme.
The Riptide GP2 dị na otutu aghụghọ ị nwere ike ahu nagide mgbe na racing na oké osimiri na gị racing ụgbọ mmiri.
03. Ncheta Valley
Egwuregwu kwụnyeere ahụ nkịtị Princess onye nwere chọrọ inyocha ọ bụla ije geometrics ka ọhụrụ na-agbanwe agbanwe. Egwuregwu e họọrọ 5/5 site "Touch Arcade" na afọ 2015 na ọ bụ ọmarịcha.
02. Portal na ọkara Life 2
Nke a bụ n'ezie a PC egwuregwu na e gbanwere ka mbadamba site Nvidia na ị na-achọ ndị Nvidia ọta na-egwu egwuregwu a.
Ọ nọwo na-na No.01 Android egwuregwu nke afọ. Na egwuregwu a na ị na-egwu na-akpọ ka nwatakịrị bụ onye nọ search maka nwanne ya nwaanyị. Ọ bụ njide nke creepy nnukwu anụ na na ụzọ nke nchọgharị, nwa okoro ahụ na-abanyekwa n'ime Limbo ụwa. Ọ na-e ọdịda na ihe karịrị 100 awards na afọ 2015 na-nwetara ihe karịrị 5000 reviews. Ọ bụ nnọọ dị zuru okè egwuregwu na-egwu na pụtara ìhè ndabere.
Ị nwere ike ugbu ibudata Android egwuregwu si n'ebe ọ bụla n'ụwa iji na-esonụ njikọ. Ndị a weebụsaịtị ga-eduzi gị iji nweta free na akwụ ụgwọ Android egwuregwu nwere fun.
> Resource> emulator> Top 10 Games maka Android Tablet